GMO Research Dhatabhesi - GMO Tsvagiridzo
Svetuka kuenda kumusoro wekurudyi navigation
Enda kunzvimbo yepasi pasi
Search kubudikidza Keyword
Kutsvaga Kwepamberi Kwemimwe Mishumo
Bhurawuza Mimwe Mishumo
Tsigira GMO Research
Ongorora sainzi yeGMOs pamwe nemishonga inouraya zvipukanana inoenderana, pamwe nemhedzisiro yavo pahutano, kurima uye nharaunda
Iyo GMO Yekutsvaga dhatabhesi ine zvidzidzo uye zvinyorwa zvemapepanhau zvinonyora njodzi kana zvinogona kuitika uye zvinokuvadza zvinokuvadza kubva kuGMOs ("genetically modified," "genetically engineered," kana "bioengineered" zvipenyu) nemishonga inowirirana yezvipembenene uye agrichemicals. Iyo dhatabhesi inoitirwa kuve sosi yekushandisa uye yekushandisa yekutsvagisa yemasayendisiti, vaongorori, vezvekurapa, vadzidzisi, uye neruzhinji rwevanhu. Kuongorora kwakadzama kwezvimwe zvidzidzo zvakakosha kuchapihwa. Yokutanga inogona kuwanikwa pano.
Tsvaga ezvekuongorora-vezera, zvinyorwa, zvitsauko zvemabhuku uye zvemukati zvekuvhura zvemukati.
Tsvaga mimwe mishumo, senge maNGO ripoti nemabhuku, izvo zvisingaenderane nezvinodiwa zve database hombe asi zvakakosha zvakaenzana uye zvakakosha.
Kuti utsvage dhatabhesi, isa maitiro ako ekutsvaga mune imwe yemabhawa ekutsvaga pamusoro kana tinya Search kubudikidza Keyword. Ndokumbira utarise kune iyo Maitiro Ekutsvaga peji kuti uwane rumwe ruzivo nezve kutsvaga kwedu dhatabhesi.
GMO Ngano Nechokwadi
Morphological uye biochemical shanduko mumakonzo evarume anodyiswa pazviyo zvakagadziriswa (Ajeeb YG)
Kugadzira Chokwadi: Bt Cotton Narratives muIndia.
Oxidative stress ye glyphosate, AMPA uye metabolites yepyrethroids uye chlorpyrifos mishonga yezvipembenene pakati pevana vepuraimari muCyprus.
Humbowo hwekumutswa kwechlordecone neglyphosate muFrench West Indies.
Mhedzisiro yezvekudya kuratidzwa kune mishonga yezvipembenene pane faecal microbiome metabolism mumapatya evakuru.
Toxic Migumisiro yeGlyphosate paNervous System: Ongororo Yakarongeka
Transgene Flow: Zvinetso kuKuchengetedzwa kwePapurazi kweMaze Landraces muBrazilian Semi-Arid Region.
Biochemical markers yemamiriro ekushanda kwechiropa muropa serum yemakonzo anodya glyphosate-resistant genetically modified soybean uye herbicide "Roundup".
Іnfluence yeglyphosate-resistant genetically modified soy uye roundup herbicide pazinga remamwe metabolites enitrogen exchange mumakonzo.
Kukura mushure mekusununguka kwemwana wemakonzo echikadzi uye zviratidzo zvemasometric zvenhengo dzemakonzo ezvizvarwa zviviri nekushandiswa kwesoya yakagadziriswa soya neRoundup.
Metabolism yenitrogen inosanganiswa muzvizvarwa zvitatu zvemakonzo pasi pesimba reglyphosate-resistant genetically modified soy uye Roundup herbicide.
Dzazvino NGO inoshuma
Kubvumirana pane GM Zvikafu Zvinofanirwa Kubva pane Yakarongeka Ongororo
Zvidzidzo Zvakawanda Zvinoratidza Yakakurumbira Chikafu cheGM Kwete SeYakachengeteka seyakajairwa Counterpart
Vazhinji vashandi vehutano uye vadzidzi vehutano vanotenda kuti GM foods haina kuchengetedzeka
Mazhinji Mapoka Ehutano Anobvunza Kuchengetedzeka kweGM foods
Kubvumirana Kwakawanda Pamusoro peGenetically Modified Food Safety
Iyi dhatabhesi inofambiswa ne GMO Yemahara USA, 501 (c) 3 yeruzhinji inofarira isingabatsiri, nerutsigiro kubva GMOSscience uye GMWatch. Nepo pasina muripo wekushandisa iyi dhatabhesi, Zvipo vanokosheswa kubatsira kubhadhara mutengo wekuenderera mberi kwekugadzirisa uye kugadzirisa. Mipiro mutero unobviswa kusvika pamwero unobvumidzwa nemutemo.
Copyright © 2022 · GMO Tsvagiridzo Kodzero Dzese dzakachengetedzwa
Usatengese ruzivo rwangu .